Ndi dmoz anwụọla? | Martech Zone
Dị ka dmoz.org:
Open Directory Project bu nke bu nke kachasi ede ihe banyere mmadu. Ndi otutu ndi editọ edeputara ya ma jikwa ya.
Maka ndị na-amaghị dmoz, ọ na-abụbu ọrụ na-ekpo ọkụ - wiki nke engines ọchụchọ ebe ndị folks nwere ike ịkọwa saịtị ma kwupụta ọbịbịa ha na net. N'oge na-adịbeghị anya, agbanyeghị, etinyela m ọtụtụ saịtị m n'ọtụtụ oge jiri ha ntinye usoro. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, anaghị ebunye saịtị m ebe ọ bụla n'ime ọdụ data nke dmoz.
Ọ dị onye na-eji data a n'ezie?
Ọ dị onye ka na-edezi data a?
Ndi data a nwere mmetụta ọ bụla na Google, Yahoo, ma ọ bụ Live ọchụchọ?
Echere m na ọ baghịzi uru ịrụ ọrụ na dmoz. Echiche gị?
Kedu ihe ịzụta Geek nke nwere ihe niile?
Feb 14, 2007 na 12:53 PM
Ekwenyere m na ọ nwụrụ anwụ oge ụfọdụ.
Achọpụtara m na Alexa amalitela iji DMOZ maka ịchọta aha na nkọwa.
Google na-ejikwa DMOZ maka otu ihe ahụ ma na-enye nhọrọ ahụ dị elu karịa nkọwa nkịtị.
DMOZ choro igba oso otutu.
Feb 14, 2007 na 12:57 PM
banyere naanị oge m ji dmoz mee ihe bụ mgbe Google ga-edepụta ya.
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ụzọ ọzọ mana anaghị m ahụ ya na-eme
Feb 15, 2007 n’elekere 2:37 nke abali
DMOZ na-adị nwayọ nwayọ n'ịtinye ndepụta ọhụrụ, ọ ga-adịkwa mgbe niile. Ọ bụ ndị ọrụ afọ ofufo a na-akwụghị ụgwọ na-achịkwa ya, ndị na-enweghị ike ịtụ anya na ha ga na-enyocha edemede ha mgbe niile maka njikọ ọhụrụ.
Omume DMOZ belatara nke ukwuu. Ọ ka dị mma ịnwe ndepụta na ndekọ ndekọ a, mana enweghịkwa amụma. Kama ịdọpụ ntutu gị na akụ a n'efu (nke nwere ike gbadata ọzọ na-enweghị ịdọ aka ná ntị) naanị kpochie ezé gị ma kwụọ Yahoo! 299 maka nhazi aha ha. Mberede & ọkwa dị elu karịa DMOZ.
Feb 15, 2007 n’elekere 11:56 nke abali
CVOS, ị nwere njikọ na Yahoo! Ndepụta ndekọ? Daalụ!
Feb 15, 2007 na 3:47 PM
DMOZ bụ ezigbo echiche na 1996! Ugbu a saịtị ọhụrụ na-apụta ngwa ngwa, nke na DMOZ enweghị ike ijide. Ọzọkwa ntinye ntinye ntanetị na nnweta nchịkọta akụkọ nọ na enweghị ike ịnweta maka ihe dịka ọnwa 6!
Ngosipụta ya dị ukwuu nke saịtị ndị dị mkpa ma dịkwa mkpa ọtụtụ afọ gara aga, mana ọ ghọrọ dinosaur n'ihe banyere iji ya arụ ọrụ. Enwere m obi abụọ google, Yahoo ma ọ bụ MSN, bụ ndị nzuzu iji tụlee ndepụta na dmoz dị ka àgwà dị oke mkpa maka ogo saịtị.
Oge ya ịkwaga na ọrụ dị elu na webụ.
Feb 15, 2007 na 5:08 PM
Ntinye aka Yahoo
dmoz anwụọla. abaghị uru, abaghị uru na mkpofu oge. Agwara m otu n'ime ndị editọ azụ n'ụbọchị ahụ gosipụtara nke a
Sep 23, 2008 na 1: 33 AM
Ee DMOZ anwụọla ogologo. Achọkwaghị Google inye DMOZ ihe dị mkpa.
Mgbe ị nwere 100% mkpa na saịtị gị anaghị edepụta ya na afọ isii. Kedu ihe nke ahụ pụtara? Gị osompi bụ nchịkọta akụkọ! Ihere me DMOZ! Edere aha niile edepụtara abụghị ndị egwuregwu kachasị n'ụdị ahụ, mana ụlọ ọrụ enweghị nnukwu ihe iyi egwu ụlọ ọrụ ndị editọ. Nke ahụ bụ ihe m hụrụ na udi nke mmasị m.
DMOZ anwụọla ma ọ bụ zombie ugbu a.
Jul 29, 2009 na 3: 18 AM
Ọ bụghị naanị na DMOZ nwụrụ anwụ mana ọ nwere ọgbakọ nwere nzaghachi ụdị 'Azịza Ngwaọrụ' maka ajụjụ ọ bụla metụtara ịdebanye saịtị, nsogbu ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla ọzọ yiri ka ọ ga-emetụta ha.
"Might nwere ike ịghọtahie ebumnuche anyị na otu anyị si arụ ọrụ ebe a. ODP bụ nzukọ afọ ofufo na-ewu ndekọ dị ka ihe omume ntụrụndụ. Ndị editọ na-edezi ebe ha chọrọ, mgbe ha chọrọ na ka ha siri chọọ n'ime mgbochi nke ikike ha. Anyị enweghị usoro ma ọ bụ usoro ịmanye ndị mmadụ ka ha rụọ ọrụ nke ha anaghị ewepụta onwe ha ịrụ.
Fọdụ ndị ọrụ afọ ofufo ga-ahazi aro ndenye gị n'oge mana anyị enweghị ike ịkọ onye ma ọ bụ mgbe nke ahụ nwere ike ịbụ. Oge agbafere nwere ike ịmalite site na ụbọchị ole na ole ruo afọ ole na ole. Ọ dịghị mkpa ịkọwapụta weebụsaịtị gị ọzọ ma ime nke a nwere ike bụrụ ihe na - abaghị uru n'ihi na aro ọzọ ga - edegharị nke mbụ ọ bụla. "
Jun 20, 2016 na 7:19 AM
ọbụna gị blogpost bụ nnọọ ochie, ọ bụ nnọọ dịkọrọ ndụ. Anyị na-anwa itinye aha webshop anyị http://www.meincupcake.de ugbu a ruo afọ 5 (!!!) wit ..nweghị ihe ịga nke ọma. Na mbido anyị na-anwale ya ugboro abụọ n'afọ, afọ a mechara anyị anwale ya ugboro asatọ. Iji hụ ma ọ dị onye ọ bụla na-arụ ọrụ na DMOZ anyị zigara ha akụkọ (ị nwere ike izigara ha "akụkọ nrụrụ aka / mmejọ" site na weebụsaịtị ha. Site nọmba tiketi m natara ka emesịrị m chọpụta, na ha enweghị Gụọ akụkọ izu ndị gara aga. Hm, dara ogbenye maka saịtị, nke ahụ buru ibu buru ibu otu oge!
Na blọọgụ ọzọ enwere m ike ịchọta ozi site n'aka onye editọ DMOZ bụ onye kwuru na ha chọrọ mgbe ụfọdụ ihe karịrị otu afọ iji bipụta ntinye, yabụ onye ọ bụla kwesịrị inye nsogbu. O kwukwara, na ọtụtụ anwa ga-eleghara ya anya ma na-edozi ya.
Ikwu eziokwu: Gini ka odi ogologo ichoro? Ma ọ bụrụ na anyị ekwesịghị inye nsogbu, gịnị kpatara webmaster ji egbusi oge ha ma ọlị? Echere m na ha liri nnukwu weebụsaịtị a n'onwe ha site na mpako ha. Olileanya nke na-enyere mmadụ aka.